Rehefa Tsy Manadino Velively Ny Fanafihana Tany Frantsa, Miezaha Koa Mahatsiaro ireo Mahery Fo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2016 11:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Română , Português, 繁體中文, 简体中文, English
Tao anatin'ny 18 volana, nahita onjam-panafihana maro i Eoropa izay nampiakatra ny fihenjanana ara-tsosialy ary nampifandrirotra resaka maro mikasika ny fivavahana sy fifindràmonina, indrindra any Frantsa. Raha toa ka ohatry ny mihodinkodina eo amin'ny tokony hamelana ny olona hanao burkini eny amoron-dranomasina ny teboka lehibe resahan'ireo haino aman-jery, haingana be dia adino ireo hetsika hafa mendrika fideràna — ireo hetsika mahagaga manampy kokoa amin'ny fanamafisana ny fanorenana ara-tsosialy ao Frantsa noho ny zavatra tsy misy idirany amin'ny akanjo fitondra milomano. Mitodika any amin'ny ireo tantara feno herim-po nandritra ny fanafihana faobe farany tao amin'ny tany Frantsay ny Global Voices.
Fanafihana tao Nice ny 14 Jolay 2016
Franck, ilay maherifon'i Nice. Sary: Twitter / @Pabliteau
49 taona i Franck ary manan-janaka roa. Raha nitondra kamiao tao anatina vahoaka be nitangorona hijery afomanga tamin'ny Andron'ny Bastille tany Nice i Mohamed Lahouaiej Boulhel, nitaingina skotera teny akaiky teny izy ary nahita ny fiandohan'ny loza. Araka ny filàzany, ity no tadidiny tamin'ny zava-nitranga:
Teny amin'ny Promenade des Anglais teny ambonin'ny skoterako izaho sy ny vadiko [ny làlana natao ho an'ny mpandeha an-tongotra nisehoan'ilay fanafihana]. Nandroso moramora izahay. Raha ny marina, nandeha hijery ny afomanga no notadiavinay, fa somary taraiky kely izahay. Noho izany, hoy aho mantsy ny vadiko, ”Tsy maninona izany. Hihinana gilasy ao amin'ny Cours Saleya [Kianjan'ny Saleya any afovoan-tananan'i Nice]. ”Nahatsapa fifanosehana avy tao aoriana izahay. Naheno kiakiaka sy fiara vitsivitsy niezaka ny handositra izahay. Niteny ny vadiko hoe, ”Mijanona, misy zavatra tsy mazava.” Tamin'ny fotoana nihodinanay teny amin'ny manodidina, dia nahita vahoaka nihazakazaka eny amin'ny làlana rehetra, toy ny hoe nandositra zavatra izy ireo. Tamin'izay no nahitanay ny fahatongavan'ilay kamiao.
Teo amin'ny afovoan'ny làlana izahay; nisy fiara vitsivitsy teo. Nitaingina ilay skotera tamin'ny hafainganana 60 kilaometatra [Efa ho 40 miles] isan'ora aho. Tsy nanana fotoana akory aho hijerena ny fitaratry ny skoterako. Dia avy eo nandalo teo akaikinay mihitsy ilay kamiao. Nisosososo nisongona ahy teo amin'ny sisin-dàlana izy. Mbola ato an-tsaiko foana ny sarin'ireo olona manidintsidina tetsy sy teroa. Tonga dia azoko ny zava-nitranga. Nanapa-kevitra ny handeha mafy kokoa aho. Ny vadiko tao andamosiko namikitra ny tànako sady nanontany ahy hoe inona izato ataoko. Nijanona aho. Nasaiko niala izy, ary namily haingana aho mba hahatratra ilay kamiao.
Mba hahatratrarana azy, tsy maintsy nanao zigzag teo anelanelan'ireo olona aho, ny sasany maty ny sasany velona. Naniry mafy ny hanakanana azy aho na inona na inona vidiny. Sady tao anaty hamamoana aho no sady tonga saina. Noho izany, niezaka ny hamily eo amin'ny ankavian'ilay kamiao ny tenako ary ny tanjoko dia ny hahatratra ny efitra familiana. Tsy ela aho dia efa tonga teo amin'ny tohatr'ilay varavarakely nisokatra, manatrika azy. Nodarohako, nodarohako ary mbola nodarohako izy tamin'ny tànako havia na dia havanana aza aho. Nameno fetaka teny amin'ny tarehiny aho fa tsy niteny na inona na inona izy. Tsy nihontsona akory izy.
Aymeric sy Sam Monrocq, mpivady iray mipetraka ao Normandy, dia nametraka tranonkala fanangonam-bola mba hividianana skotera vaovao ho an'i Franck. Nahatratra hatramin'ny 25,466 euros ( efa ho $30,000) ny hetsika. Nampiasain'i Franck ny ampahatelon'ny vola mba hividianana skotera vaovao, ary ny ambiny kosa dia nataony fanampiana ho an'ireo toeram-pitsaboana, fikambanana eo an-toerana, ary hetsika hafa.
Fanafihana tao Parisy ny 13 Novambra 2015
Ludovic Boumbas araka izay navoakan'ny namany tao amin'ny twitter @chilavertlille /
40 taona i Lodovic Boumbas ary injeniera IT tao Lille, Frantsa. Nipetraka teo amin'ny Bistro La Belle Epique tao Parisy izy raha toa ka narefotry ny mpitolon'i Daesh tao amin'ilay trano fisakafoanana ny basy. Nipetraka niaraka taminy ny namany, noho izany nanipy ny tenany teo alohany izy mba hiarovana azy amin'ny bala. Maty teo an-toerana i Lodovic, raha toa ka voa ihany koa ilay namany, fa izy kosa tafavoaka velona. Avy any amin'ny Repoblikan'ny Kongo i Lodovic. Mahatsiaro azy am-pitiavana ilay namany:
Mamaritra an'i Atoa Boumbas ho olona tia olona sy fitetezam-paritany ireo namany. ”Iray tamin'ireo olona tsara eo amin'ny fiainana izy, olona tsara.”
Nicolas Cantinat, 37 sy Julien Galisson 32, dia nihetsika toa i Lodovic tamin'ny fitifirana, niaro ireo olona teo amin'ny manodidina raha nanako ny bala. Samy maty noho ny ratrany i Nicolas sy Julien. Tao amin'ny Bataclan, toerana nisehoan'ny fandripahana ratsy indrindra tamin'iny alina iny, Sebastien, lehilahy 34 taona avy any Arles, no niezaka ny hitsoaka ilay famonoana raha toa ka nahita vehivavy bevohoka iray nihantona teo am-baravarakely. Niangavy ireo olona teny ambany mba hitaty azy , raha milatsaka izy. 15 metatra avy amin'ny tany ilay varavarakely (50 feet). Nampahatsiahy ny zava-nitranga avy eo i Sebastien:
Tamin'iray tamin'izy ireny, no nihantonan'ny vehivavy bevohoka iray izay niangavy ireo olona teny ambany mba hitaty azy raha misaoty izy. Teny ambany koa—korontona be. Nandeha avy amin'ilay varavarakely hafa iray aho ary nifikitra tamina fantson-drivotra mba hahatratrarana azy eny amin'ny 15 metatra ambonin'ny tany. 5 minitra no aritro ary indro nangataka ahy ilay vehivavy reraka mba hanampy azy hiverina ao anatiny. Ka izay no nataoko.
Voarakitra anaty lahatsary avokoa ny sehatra rehetra:
Fanafihana tao Parisy ny 9 Janoary 2015
Avy any Mali i Lassana Bathily. Nivarotra tao amin'ny trano fivarotana Hyper Casher tao Parisy izy rehefa nandeha niaraka taminà basy ary namono olona efatra i Amedy Kolibaly, mpikambana ao amin'i Daesh, nitetika ny mbola hamono bebe kokoa. Nanafina olona teo amin'ny enina farafahakeliny ary zaza tao amin'ny trano mangatsikan'ilay trano fivarotana i Lassana ary avy eo nivoaka ho any amin'ny efitrano fitahirizana mba hiresahana amin'i Kolibaly. Ity misy lahatsary misy ny fijoroany vavolombelona tao aorian'ny hetsika:
Nandritra ny fanafihana, Yoann Kohen, mpiara-miasa amin'i Bathily ao amin'ilay trano fivarotana, dia niezaka ny hanala ny fitaovam-piadiana teny amin'ilay mpanao ratsy ary notifirin'i Kolibaly teo amin'ny lohany. Ny rain'i Yoann dia avy any Alzeria ary ny reniny avy any Tonizia.
Tsy nanampo ny zava-nitranga tampoka nahazo azy ireo olona ireo, ary namaly ara-boajanahary sy noho ny amin'ny tenany fotsiny. Raha ny marina, dia nisy marobe ireo ohatranà asan'ny herimpo nandritra ireny fanafihana ireny, miainga avy any amin'ny polisy niditra irery tao amin'ny efitra nisy ireo mpanafika tao amin'ny Bataclan ka hatramin'ireo nanokatra ny varavarany ho an'ireo mpivoaka alina tsy nahita haleha.
Raha manomboka mankarenina ny lahateny fambaboana ny fon'ny vahoaka ary mandrakotra faritra lehibe ao Eoropa ny tahotra (indrindra ao Frantsa), ny fahatsiarovana ireo tantara-na fitiavana namana sy sorona ireo no zava-dehibe noho ny hatramin'izay.